DMG fisie, ahoana no fisokafany? F'inona izy ireo? | Avy amin'ny mac aho
Ignacio Sala | | Programa Mac, Tutorials
Raha nanapa-kevitra ny hiova amin'ny Windows ka hatramin'ny farany izahay, azo inoana fa mandritra ny herinandro voalohany dia ho very ianao, tsy noho ny fiovan'ny interface, fa noho ny fomba ahafahantsika mifandray aminy ihany koa. Apple operating system ho an'ny solosaina sy solosaina finday. Ny iray amin'ireo fanovana lehibe tsy hahasarika ny sain'ny olona indrindra dia ny tsy misy fisie rakitra azo ampiharina, ireo rakitra .exe mahazatra.
Ao amin'ny Mac no ampiasaina ny endrika DMG. Ireo rakitra ao amin'ity endrika ity dia lahatahiry fitoeran-javatra izay hahitanao ireo programa tadiavinay hapetraka amin'ny solosainay, haingana sy mora. Raha tsy mitady rindranasa manokana tsy misy ao amin'ny Mac App Store ianao, dia mety tsy ho rakitra tahak'ity karazana ity no hiafaranao.
1 Inona ny rakitra DMG ary inona no ilana azy?
2 Ahoana ny fomba hanokafana fisie DMG
2.1 Mametraka ny atiny izay ao anatiny
2.2 Avereno amin'ny drive ny atiny
3 Fampiharana inona no ilaiko hanokatra fisie amin'ny endrika DMG
4 Inona no hatao raha tsy hisokatra ny fisie DMG
5 Ahoana ny fomba hanovana rakitra DMG ho EXE
6 Ahoana ny fomba famakiana rakitra DMG amin'ny Windows
7 Ahoana ny fomba famakiana rakitra DMG amin'ny Linux
Inona ny rakitra DMG ary inona no ilana azy?
Ny fisie DMG dia mitovy amin'ny fisie amin'ny endrika ISO ao amin'ny Windows, satria rehefa nosokafana izy ireo dia misy singa vaovao noforonina, singa iray tsy maintsy idiraintsika mba hametrahana ilay rakitra mifanaraka amin'ny solosainantsika na hamindra azy fotsiny amin'ny fampirimana fampiharana . Ity karazan-drakitra ity dia mazàna misy, ankoatry ny fisie izay ahafahantsika mankafy ilay programa, antontan-taratasy misy famaritana fohy na miaraka torolàlana momba ny fiasa na ny fampifanarahana azy.
Ahoana ny fomba hanokafana fisie DMG
Ny fisie DMG dia mitovy amin'ny ISO ao Windows. Ireo rakitra ao anaty endrika ISO, tsy mamela antsika hiditra ny atiny sy handika azy ireo amin'ny CD na DVD toa azy ihany, fa koa avelao izahay hametraka na handika ny atiny. Ny telovolana mitovy amin'izany dia mitranga amin'ny fisie amin'ny endrika DMG, satria ny rakitra dia mety ho installer izay hongotanay, fe-potoana, na mety ho sary kapila misy rakitra hafa izay tsy maintsy adika tahaka ny ao anaty rakitra hafa na amin'ny kapila ivelany.
Mametraka ny atiny izay ao anatiny
Na dia toa toa mila manao dingana sarotra aza isika amin'ny voalohany mba hahafahana manokatra rakitra amin'ny endrika DMG, tsy misy zavatra hafa lavitra, satria tsy maintsy manindry indroa fotsiny isika hamoronana singa vaovao izay ho hitantsika ny atiny rehetra ao anatiny. Avy eo isika ihany no mila ampidiro ny mpamily resahina ary alefaso ilay rakitra mametraka na mihazakazaka.
Tokony hojerentsika ny karazana fisie izay, satria indraindray, ny fametrahana azy dia tsy tanterahina amin'ny Mac, fa mandeha fotsiny ilay fampiharana, koa raha hamafana ny rakitra .DMG isika avy eo. tsy hanana fidirana amin'ny fampiharana intsony izahay. Amin'ireto tranga ireto, raha toa ka fampiharana azo ampiharina io dia tsy maintsy sintomintsika mankany amin'ireo rindranasa ireo.
Avereno amin'ny drive ny atiny
Raha etsy ankilany, sary izay misy kopian'ny singa iray, dia tsy hitondra soa ho antsika ny fidirana ao anaty ny rakitra hanadihadiana azy raha toa ka tsy afaka miditra amin'ny data na manao fampiasana ny fampiharana. Amin'ireo tranga ireo dia tsy maintsy ampiasaintsika ny fampiasana Disk Utility, izay azontsika atao safidio ny fisie amin'ny endrika DMG izay tianay haverina sy ilay singa izay tiantsika hanaovana azy haingana sy mora be.
Fampiharana inona no ilaiko hanokatra fisie amin'ny endrika DMG
Tahaka ny amin'ny Windows dia tsy mila rindrambaiko antoko fahatelo ianao hiara-miasa amin'ireo rakitra amin'ny endrika ISO, amin'ny Mac dia tsy mila rindrambaiko hiasa miaraka amin'ireo rakitra amin'ny endrika DMB ianao, na dia eo amin'ny Internet aza dia afaka mahita rindrambaiko isan-karazany mamela antsika hanao tsy tena ilaina, raha tsy terena izahay hanokatra an'ity karazana fisie ity amin'ny sehatra hafa toy ny Windows na Linux, izay ny fampiharana PeaZip no iray amin'ireo atolotra indrindra, fampiharana maimaim-poana tanteraka.
Inona no hatao raha tsy hisokatra ny fisie DMG
Hatramin'ny nanombohan'ny macOS Sierra, Apple dia nanala ny fahaizany nametraka fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo izay tsy noforonin'ny mpamorona fantatry ny Apple teo aloha. Raha ny fisie DMG izay misy ilay fampiharana tiana apetraka dia mampiseho hafatra diso aminay, milaza fa mety ho simba ilay rakitra, dia tsy maintsy ampodininay ny fahafaha-mampihetsika ny fampiharana an'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny fidirana ity tsipika manaraka ity ao amin'ny Terminal.
sudo spctl –doka-mahavita
maso! eo alohan'ny tompo dia misy tadiny roa (- -) Manaraka izany dia tsy maintsy mamerina ny Finder amin'ity baiko manaraka ity izahay: Killall Finder
Raha vantany vao niditra an'io baiko io isika dia miverina amin'ny sehatra fiarovana sy tsiambaratelo hita ao anatin'ny System Prefers ary amin'ny Avelao ny fisoratana anarana alaina: select Na aiza na aiza.
Ahoana ny fomba hanovana rakitra DMG ho EXE
Ny fisie DMG, araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, dia fampirimana misy rindrambaiko maromaro, izay mamorona singa iray rehefa nosokafantsika izy ireo, noho izany dia tsy rakitra azo tanterahina amin'ny Mac, noho izany. tsy afaka mamadika rakitra DMG ho EXE izahay. Ny fiezahana mamadika rakitra DMG ho rakitra azo tanterahina dia toy ny fanovana ny fampirimana misy sary (ohatra) ho rakitra azo tanterahina.
Ahoana ny fomba famakiana rakitra DMG amin'ny Windows
Raha te hiditra amin'ny atiny voatahiry ao anaty fisie DMG amin'ny PC isika, ao amin'ny Windows no ananantsika rindranasa isan-karazany ahafahantsika mamaha ny zotran'ilay rakitra hahazoana miditra ao anatiny. Ny olana iray hafa dia ny hoe afaka manao zavatra amin'ny atiny isika. Ny rindranasa tsara indrindra izay hitantsika eny an-tsena amin'izao asa izao dia ny PeaZip, 7-Zip ary ny DMG Extractor.
Iray amin'ireo fitaovana maimaim-poana tsara indrindra hiasa miaraka amin'ireo rakitra voatrikitrika dia ny PeaZip, fitaovana iray mifanaraka amin'ny endrika ampiasaina rehetra eny an-tsena, ho fanampin'ny DMG, ISO, TAR, ARC, LHA, UDF ... Ny interface amin'ny mpampiasa dia tena intuitive ary tsy hanana olana tsy ho ela isika mitazona an'ity rindranasa ity hamongorana ny fisie DMG avy amin'ny Windows PC.
DMG Extractor, araka ny anarany, dia fampiharana tsara azo atao esory ny atiny avy amin'ny fisie amin'ny endrika DMG haingana sy mora. Ity fitaovana ity dia tsy maimaim-poana fa amin'ny fotoana manokana, azontsika atao ny misintona ny kinova fitsapana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity, kinova izay ahafahantsika mamoaka rakitra amin'ny endrika DMG izay tsy mihoatra ny 4 GB ny habeny.
7-Zip dia fitaovana tena tsara hanindriana sy hamoahana ny karazana rakitra amin'ny Windows PC, fitaovana iray ihany koa maimaim-poana tanteraka sy mifanaraka amin'ny rakitra macOS DMG. Vantany vao nametraka ilay rindranasa isika dia mila mametraka ny tenantsika eo ambonin'ilay rakitra fotsiny, tsindrio havanana ary safidio misokatra amin'ny zip-7 mba hahafahan'ny atiny esorina.
Sintomy ny 7-Zip
Ahoana ny fomba famakiana rakitra DMG amin'ny Linux
Fa raha te hanokatra fisie amin'ny endrika DMG amin'ny Linux izahay dia afaka mampiasa PeaZip indray, ilay fampiharana izay azontsika ampiasaina hamehezana ity karazana rakitra ao amin'ny Windows ity, fampiharana iray mifanaraka amin'ny endrika maherin'ny 180 Ary afaka ihany koa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » .Dmg fisie
santiago estrada dia hoy izy:
Manana olana aho.
Rehefa tsindrio indroa ilay rakitra dia tsy hisokatra izy io, fa mijanona ho toy ny tsy niditra tao amin'ilay fisie
Mamaly an'i santiago Estrada
Fampianarana, Mac ary hevitra. Hetsika stratejika
Lisa, zanakavavin'i Steve Jobs dia manoratra boky momba ny fifandraisany amin'ny rainy